ကန ဦး D2 Dopamine Receptor Sensitivity သည်ကြွက်များတွင်ကိုကင်း၏ထိရောက်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးကိုခန့်မှန်းသည်။
ကနဦး D2 Dopamine receptor ထိခိုက်လွယ်မှုကင်းထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်ကြွက်များအတွက်ဆုကြေး (2015) ခန့်မှန်း
Kathryn အီး Merritt,
ဆက်နွယ်မှု: စိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန, ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်, ကျောက်သား, ကော်လိုရာဒို, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ရိုင်ယန် K. Bachtell
* E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Affiliate: စိတ်ပညာဌာနနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ, ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်, ကျောက်သား, ကော်လိုရာဒို, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု,
အာရုံကြောသိပ္ပံ, ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်, ကျောက်သား, ကော်လိုရာဒို, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဘို့အစင်တာ,
အပြုအမူမျိုးရိုးဗီဇအဘို့အင်စတီကျု, ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်, ကျောက်သား, ကော်လိုရာဒို, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Published: နိုဝင်ဘာလ 4, 2013
အဆိုပါ mesolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း dopamine receptors ၏ activation ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏ Initiative နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသည်။ အဆိုပါ D ကို၏ expression2 dopamine အဲဒီ receptor မျိုးကွဲနာတာရှည်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းတစ်ဦး predisposing အချက်နှင့်အကျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးအဖြစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ဒါဟာ: D အကြားကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါသည်2 ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုကို enable မယ်လို့ dopamine အဲဒီ receptor function ကိုနှင့်ကိုကင်း sensitivity ကို။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ D ကိုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအမြတ်ထုတ်2 ကိုကင်း-mediated အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ dopamine အဲဒီ receptor ဆွ။ Outbred, အထီး Sprague-Dawley ကြွက်ပိုင်းတွင် D ကို၎င်းတို့၏ locomotor တုန့်ပြန်သဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်2 အတွင်း - session တစ်ခုတက် - တုံ့ပြန်မှု regimen (0, 0.1, 0.3 & 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, sc) တွင် dopamine အဲဒီ receptor agonist, quinpirole ။ ကြွက်များကို HD (HD) ဟုခေါ်သည်2 နှင့် ld2အသီးသီး) ဟာသူတို့ရဲ့ quinpirole-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြွက်နောက်ပိုင်းတွင်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု (5 နှင့် 15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) တွင်အပြောင်းအလဲများတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ကိုကင်းများ၏ psychostimulant ဆိုးကျိုးများအတွက်ကွဲပြားမှုအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ကြွက်လည်းကင်း၏အနိမ့်ထိုးဖို့အခွအေနေအရပျကို preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကွဲပြားမှုအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတစ်ဦးကိုကင်းသောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်တော်မမူကြောင်း (7.5 / ကီလိုဂရမ်, ip mg) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြွက်အသီးသီးကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အားဖြည့်များ၏ fixed အချိုး 1 နှင့်5အချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများဝယ်ယူဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များကြောင့် HD ကိုသရုပ်ပြ2 ကြွက် ld နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုကင်း, ကိုကင်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုနှိုးဆွသည့် locomotor မှ sensitivity ကိုမြှင့်တင်ရန် သာ. ကွီးမွတျကိုကင်းသောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးပြသနှင့် Self-စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြ2 တိရိစ္ဆာန်များ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်: D အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအကြံပြု2 dopamine အဲဒီ receptor sensitivity ကိုကိုကင်း sensitivity ကိုနှင့်ဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကိုးကား:Merritt Ke, Bachtell RK (2013) ကနဦး: D2 Dopamine receptor ထိခိုက်လွယ်မှုသည်အထိအတွက်ကင်းထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်ဆုကြေးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ PLoS ONE 8 (11): e78258 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0078258
အယ်ဒီတာ: အာဗြဟံသည်အေ Palmer က, ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Received: မေလ 28, 2013; လက်ခံခဲ့သည်: စက်တင်ဘာလ 10, 2013; Published: နိုဝင်ဘာလ 4, 2013
မူပိုင်: © 2013 Merritt, Bachtell ။ ဤသည်အသိအမှတ်ပြုကြသည်မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Open-access ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုရသောကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေဆောင်းပါး, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွားဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း:ဤလုပ်ငန်းကို R03 DA 029420 ကထောက်ခံခဲ့သည်; Cu ဆန်းသစ်သောအမျိုးအနွယ် Grant က။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
အခြားသူများကိုမကျင့်စဉ်အဘယ်ကြောင့်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ပုံစံများဖွံ့ဖြိုးနားလည်ခြင်းမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများဆုံးညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ epidemiological လေ့လာမှုများကိုကင်းကိုအသုံးပြုဖို့သူတွေကိုနီးပါး 17% ကနဦးကင်းအသုံးပြုမှု 10 နှစ်အတွင်းကင်းမှီခိုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသတင်းပို့ ။ ဤသည်ကိုအခြားသူများမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်ဦးသမိုင်းရှိခြင်းနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေးမှီခိုဖွံ့ဖြိုးဆဲခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်စဉ်အချို့တစ်ဦးချင်းစီ, အားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ မူးယစ်ဆေးမှီခို (စသည်တို့ကိုဥပမာမူးယစ်ဆေးရရှိမှု, လူမှုရေးဖိအား,) အထောကျအကူစေခြင်းငှါများစွာသောအချက်တွေရှိပါတယ်နေစဉ်, အားနည်းချက်များနှင့်ယဉ်ပါးတစ်ဦးချင်းစီအကြားကွာဟမှုကိုလည်း၏မူးယစ်ဆေးဖို့တုန့်ပြန်အခြေခံသည့် neurobiological စနစ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုကတဆင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါ အလွဲသုံးစားမှု ။ ထိုကွဲပြားမှုကိုနားလည်ခြင်းအရှိဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မေးခွန်းများကိုဆည်းကပ်၏တဦးတည်းသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။
အဆိုပါ mesolimbic dopamine (DA) စနစ်ကတခြား limbic ဒေသများတို့တွင်နျူကလိယ accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံဖို့ ventral tegmental ဧရိယာကြောင်းစီမံကိန်းတွင် dopamine ဆဲလ်ပါဝင်ပါသည် ။ ကိုကင်းလျှင်မြန်စွာကင်းအားဖြည့်ဖို့စတေသော DA ပို့ဆောင်ရေး, ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ terminal ကိုတိုင်းဒေသကြီးများတွင် extracellular DA elevates ။ အဆိုပါ mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ activation ကျယ်ပြန့်အလွဲသုံးစားမှု၏အခြားမူးယစ်ဆေးကင်းအသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏ Initiative နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသည် ။ mesolimbic DA circuitry အတွင်း ALTER ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant အသုံးပြုမှု၏အကျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးအဖြစ်နှင့်တစ်ဦး predisposing အချက်အဖြစ်သရုပ်ပြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုမှု D ကိုလျော့နည်းသွားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်2 ကိုကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏ ventral striatum အတွက် DA အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် , ထိုအကြံပြု D ကိုလျော့နည်းသွား2 DA အဲဒီ receptor စကားရပ်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ : D အတွက်လျော့နည်းခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးနှစ်ရှည်လများဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိခဲ့သည်2 ကိုကင်းချိုးဖောက်လေ့လာတွေ့ရှိ DA အဲဒီ receptor စကားရပ်နာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ဤအပြောင်းအလဲတချို့ကင်းမှီခိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်ဦးချင်း predispose စေခြင်းငှါတစ်ဦး Pre-တည်ဆဲအေးစက်ကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိတစ်ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မကြာမီကအလုပ် D ကိုလျှော့ချကြောင်းအကြံပြု2 DA အဲဒီ receptor စကားရပ်တကယ်တော့တစ်ဦးအားနည်းချက်အချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ : D ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူထို့ကြောင့် Non-စွဲတစ်ဦးချင်းစီ2 DA အဲဒီ receptor အစီရင်ခံစာ psychostimulant အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေး "ကဲ့သို့" methylphenidate ။ အဆိုပါ: D ချို့တဲ့ Mutant ကြွက်2 DA အဲဒီ receptor ရိုင်း-type အမျိုးအစားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲ , အနေဖြင့် Over-ဖော်ပြ: D2 အဆိုပါ ventral striatum ကျဆင်းခြင်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် DA receptors ။ အတူတူကဤလေ့လာမှုများ: D အတွက် Pre-ရှိပြီးသားပွောငျးလဲကြောင်းအကြံပြု2 : D များ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍကိုရည်မှတ်မသေချာမရေရာမှုများရှိနေဆဲရှိပါတယ်ပေမယ့် DA အဲဒီ receptor စကားရပ်, ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းငှါ2 DA တစ်ဦးအားနည်းချက်အချက်အဖြစ် receptors ။
: D အကြား dissociation အတွက်ထွန်းသစ်စအကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်2 DA အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့် D ကို2 DA အဲဒီ receptor function ကိုနှင့် sensitivity ကို။ ကြွက်များတွင်မူးရူးကဲ့သို့ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး D ကိုလျော့နည်းသွား recapitulates နေစဉ်2 DA အဲဒီ receptor စကားရပ်လူ့ကင်းချိုးဖောက်လေ့လာတွေ့ရှိသကဲ့သို့, D ကိုတုန့်ပြန်အတန်ငယ်ဝိရောဓိတိုး, G ပရိုတင်းကို Activation ရှိပါတယ်2 DA အဲဒီ receptor ဆွ ။ ထိုနည်းတူစွာကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့: D ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတိုးပွါး2 DA receptors , ။ ဤပြောင်းလဲမှုများ: D ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးနေချိန်မှာကြောင်းအကြံပြု2 DA receptors, D ကို၏ sensitivity ကိုလျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါ2 DA receptors အထပ်ထပ်ကိုကင်းအောက်ပါတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာအယူအဆနာတာရှည်ကင်း D ကို၏ psychostimulant သက်ရောက်မှုမှလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ထုတ်လုပ်ဘယ်မှာအများအပြားအပြုအမူ Paradigm တွင်ထင်ဟပ်နေသည်2 DA အဲဒီ receptor agonists , , , : D ၏, နှင့်ဆွ2 DA receptors ကြွက် Self-အုပ်ချုပ်မှုမော်ဒယ်တွေအတွက်ရှာကြံကင်းဖို့ခိုင်မာတဲ့ reinstatement ထုတ်လုပ် , , , , , ။ ဒါဟာ: D များ၏ sensitivity ကိုအတွက် Pre-ရှိပြီးသားကွဲပြားမှုရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး2 DA receptors ကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများဆက်စပ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတှငျကြှနျုပျတို့: D များ၏အမူအကျင့် sensitivity ကိုအတွက်ဘယ်လိုတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ကြွက်မော်ဒယ်အသုံးပြုသွားမည်2 DA receptors ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေဆက်စပ်။ အဆိုပါ D ကို၏စီမံခန့်ခွဲမှု2 DA အဲဒီ receptor agonist, quinpirole, မူးယစ်ဆေးရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် locomotor တုံ့ပြန်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏မြင့်မားသောဒီဂရီထုတ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော် D ကိုစမ်းသပ်ဖို့တစ်မော်ဒယ်အဖြစ် quinpirole ဖို့ကြွက်ရဲ့ကနဦး locomotor တုံ့ပြန်မှုတွင်ဤတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအမြတ်ထုတ်2 နောက်ဆက်တွဲကင်း-mediated အပြုအမူတွေများအတွက်အားနည်းချက်အချက်အဖြစ် DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို။ quinpirole-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုးပြသသူများသည်တိရစ္ဆာန်များမြင့်မားတဲ့: D ရှိခြင်းအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို (HD ကို2), ကိုပိုမိုကျိုးနွံ activation ရှိခြင်းသူတွေကိုကြွက်အနိမ့်: D ရှိခြင်းအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာစဉ်တွင်2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို (ld2). ဒီကနဦးစရိုက်လက္ခဏာတွေအပြီးတွင်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကနေကြွက်ကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျား, ကိုကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
275-325 ဂရမ်အလေးချိန်အထီး Sprague-Dawley ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ်, Portage, MI) တစ်ဦးချင်းရောက်ရှိအပေါ်သို့သျောခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ပေးခဲ့ ကြော်ငြာ libitum ညွှန်ပြဘယ်မှာမှတစ်ပါးအစားအစာနှင့်ရေ။ အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ: အားလုံးစမ်းသပ်ချက်တစ်ခု (12 12) ၏အလင်းကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ဒီလေ့လာမှုတွေကကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်သာတည်လမ်းညွှန်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်များနှင့်ကျောက်သားမှာကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်မှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
တစ်ဦး Novell ပတ်ဝန်းကျင်ဖို့လေ့
Locomotor လှုပ်ရှားမှု photobeams ၏ 16 အားလုံးနှင့်အတူအတွက် 16 × 15 × 16 တိုင်းတာခြင်း plexiglass အခန်းများ (San Diego မှတူရိယာ, San Diego မှ,, CA, USA) တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ပါသည်ဆိတ်ကွယ်ရာနှစ်ဦးစလုံးအလျားလိုက်လေယာဉ်ဖြတ်ပြီးအတွက် 1 လှပတဲ့။ အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ: အားလုံး locomotor စမ်းသပ်မှုဟာ (12 12) ၏အလင်းအဆင့်စဉ်အတွင်း unlit လှုပ်ရှားမှုအခန်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များအစပိုင်းတွင် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) locomotor စမ်းသပ်ခြင်း-သွေးဆောင် quinpirole မှကြိုတင်2နာရီများအတွက်ဝတ္ထု locomotor စမ်းသပ်ခြင်းအခန်းများမှ habituated ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Quinpirole-သွေးဆောင် Locomotor အပြုအမူ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ
အဆိုပါ D ကိုမှကနဦး locomotor တုံ့ပြန်မှု2 DA အဲဒီ receptor agonist, quinpirole ကြိုတင်မဆိုနောက်ထပ်အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အုပ်စုများသို့တိရိစ္ဆာန်များခွဲခြားဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ: စမ်းသပ်မှုတိရစ္ဆာန်ဟာရောင်းချသူထံမှရောက်ရှိလာခဲ့နှင့်တစ်ဦး (7 12) ၏အလင်းကာလအတွင်းမိုက် locomotor အခန်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်အနည်းဆုံး 12 ရက်အကြာမှာစတင်ခဲ့သည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များကြိုတင်မဆိုအလားအလာဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပပျောက်ဤလုပျထုံးလုပျနညျးအစမှ5နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4မိဘို့ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များပထမဦးဆုံး (အထကျကိုကြည့်ပါ) စမ်းသပ်ခြင်း quinpirole မှကြိုတင်2နာရီနေ့ကိုများအတွက် locomotor စမ်းသပ်ခြင်းယန္တရားမှ habituated ခဲ့ကြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Quinpirole-သွေးဆောင်ရွေ့လျားတစ် 5-နာရီအတွင်း-session ကိုထိုး-တုံ့ပြန်မှု protocol ကိုအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်: အလုပ်ချိန်နာရီဟာ agonist ၏ဆေးများတက်သဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 1-နာရီလေ့ (0, 0.1, 0.3 နှင့် 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) ။ (အောက်တွင်ကြည့်ရှုခြင်း, Curve လက်အောက်တွင်ဧရိယာအဖြစ်တွက်ချက်) စုစုပေါင်း quinpirole-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးကပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲဖြစ်စေမြင့်မားတဲ့: D အဖြစ်ကဤကြွက်ခွဲခြားဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်2 န (HD ကို2) သို့မဟုတ်အနိမ့်: D2 န (ld2) ။ ဤရွေ့ကားလုပျထုံးလုပျနညျးဖော်ပြထားတဲ့အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ (ဆိုလိုသည်မှာကင်းရွေ့လျား, နေရာအေးစက်နဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေး) ၏အသီးအသီးအဘို့ (ကြွက်အုပ်စုများတူညီအသက်အရွယ်နှင့်အလေးမှာအတူတူပင်ရောင်းချသူထံမှရောက်ရှိလာသော) တိရစ္ဆာန်များ၏အတော်ကြာအလိုက်အတွက်တူညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအလိုက်အသီးအသီးမှာပျမ်းမျှရမှတ်နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်စမျးသပျခံခဲ့ရပေမယ့်နောက်ထပ်ဒေတာကနေလေ့လာဆန်းစစ်ဖျက်သိမ်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆောင်များတွင်အတွင်းရမှတ်များ၏ဖြန့်ဖြူးသှေးအတော်လေးဆင်တူခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့တိရစ္ဆာန်များ၏အလိုက်အကြား quinpirole-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကွာအဝေးအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ပျမ်းမျှရမှတ်စောငျ့ရှောကျခဲ့တယျ။ ထို့ကြောင့်, HD ကို2 နှင့် ld2 အမျိုးအစားခွဲခြားမှုတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းဆောင်များတွင်အတွင်းလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကိုကင်း-သွေးဆောင် Locomotor အပြုအမူ
တဦးတည်းတိရစ္ဆာန်များ၏ဆောင်များတွင် (N ကို = 39) ခုနှစ်, locomotor တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု 3-နာရီအတွင်း-session ကိုကိုကင်းဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှု protocol ကို အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ (12 12) အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာကဤအကဲဖြတ်တစ်ဦး၏အလင်းကာလအတွင်းမိုက် locomotor အခန်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်မှုအခန်းသူတို့ရဲ့ quinpirole sensitivity ကို၏ကနဦးစရိုက်လက္ခဏာတွေအောက်ပါ 5-7 ရက်ပေါင်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှုနေ့ရက်တွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် 1 နာရီများအတွက် locomotor အခန်းထဲသို့ habituated ခဲ့ကြသည်ပြီးတော့ကိုကင်း (5 နှင့် 15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) ၏ဆေးများကွှအလုပ်ချိန်နာရီအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
အခြားတိရစ္ဆာန်များ၏ဆောင်များတွင် (N ကို = 37) ခုနှစ်တွင်, နေရာအေးစက်အနေနဲ့ဘက်မလိုက် 3-အဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးဘက်မလိုက် 3-အခန်းထဲကယန္တရားအတွက်တိုင်းတာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ခြင်း quinpirole sensitivity ကို၏ကနဦးစရိုက်လက္ခဏာတွေအောက်ပါ7ရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုအေးစက်အခန်းများ (15 စင်တီမီတာ× 25 စင်တီမီတာ× 35 စင်တီမီတာ) (ဒေါင်လိုက်အဖြူနှင့်အနက်ရောင်အစင်း vs. မီးခိုးရောင်) မြို့ရိုးကိုပုံစံများအတွက်ကွဲပြားခဲ့ကြခြင်းနှင့်ကြမ်းပြင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (အပေါက် vs. ဇယားကွက်) ။ အဆိုပါစင်တာကိုအခန်း (15 စင်တီမီတာ× 10 စင်တီမီတာ) အဖြူနံရံများနှင့် plexiglass ကြမ်းပြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကုန်သည်များအတွက်ယန္တရားထဲမှာတိရိစ္ဆာန်အနေအထားနှင့်လှုပ်ရှားမှု detect လုပ်ဖို့အနီအောက်ရောင်ခြည် photocells တပ်ဆင်ထားကြသည်။ အေးစက် (Pre-အေးစက်) ရှေ့တော်၌ထိုနေ့၌ 1000-1500 နာရီ မှစ. ကြွက်ကနဦးဘက်လိုက်မှုအဘို့စမ်းသပ်ဖို့ 20 မိအားလုံးကိုသုံးအခန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းအခန်းအတွက် 92% အချိန်ကနဦးဘက်လိုက်မှုပြသသောကွောငျ့တစျခုမှာတိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်သုံး 30-မိဆားအေးစက်အစည်းအဝေးများနှင့်သုံး 30-မိကိုကင်း (7.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) အေးစက်အစည်းအဝေးများလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကိုကင်းအေးစက် 0800-1100 နာရီအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်နေစဉ်ဆားအေးစက်, 1500-1700 နာရီအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Lab ထဲမှာပဏာမလေ့လာမှုများကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလူအပေါင်းတို့ကြွက်များတွင်နေရာတစ်နေရာ preference ကိုထုတ်လုပ်မဟုတျကွောငျးကိုသရုပ်ပြကြောင့် 7.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းထိုးရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ထို့ကြောင့်ဤကင်းထိုးနှစ်ခုအုပ်စုများအကြားနေရာတစ်နေရာ preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလားအလာရှိသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့စံပြဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှု session တစ်ခု (Post-အေးစက်) 1000 နာရီနှင့် 1500 နာရီနှင့်ကြွက်များအကြားကောက်ယူခဲ့သည်ကိုထပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်သုံးခုအခန်းနှင့် preference ကိုအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်မူးယစ်ဆေးအခန်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်အနုတ်အချိန်ဆားအခန်း (အေးစက်သောအရပ် preference ကိုအတွက်သုံးစွဲ (CPP က) ရမှတ်) ။
နောက်ထပ်တိရစ္ဆာန်များ၏ဆောင်များတွင် (N ကို = 29) quinpirole sensitivity ကို၏ကနဦးစရိုက်လက္ခဏာတွေအောက်ပါ sucrose လုံးလေးများများအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ self-အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှစ်ခုတုံ့ပြန်မှုခရိုနီတပ်ဆင်ထားအော်ပရေတာအေးစက်အခန်းများ (Med-Associates မှ, စိန့် Albans, VT) တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ကနဦး quinpirole စမ်းသပ်ခြင်းအောက်ပါခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဤကြွက်အစားအစာ-ကန့်သတ်အလေးချိန်အမြတ်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ ရှိ. , ရှာမှီးစံ (1 sucrose လုံးလေးများ) အောင်မြင်ခဲ့ချိန်အထိတစ်ဦး fixed အချိုး 1 (FR50) အားဖြည့်အချိန်ဇယားအပေါ် sucrose လုံးလေးများများအတွက်လီဗာ-စာနယ်ဇင်းမှလေ့ကျင့်သင်ကြား။ ဒီစံနှုန်းရောက်ရှိဖို့ရန်အောင်းနေချိန်, ဤစမ်းသပ်ချက်အတွက်မှီခို variable ကိုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးကြွက်သင်တန်း၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 ရက်အကြာမှာစံနှုန်းရောက်ရှိနေပြီနှင့်ကျွေးမွေးခဲ့ကြ ကြော်ငြာ libitum အဲဒီနောက်။
အဆိုပါ sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အနည်းဆုံးတနေ့အောက်ပါ ကြော်ငြာ libitum တခြားနေရာဖော်ပြထားသကဲ့သို့အစာကျွေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, halothane မေ့ဆေး (1-2.5%) နှစ်အောက် jugular ပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ ။ (5 / ကီလိုဂရမ် /7μl mg, ဃ) တိရိစ္ဆာန်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းခွဲစိတ်ရာမှပြန်လည်နာလန်ထူ၏ 0.5-100 ရက်အကြာမှာတစ် FR1 အောက်မှာ 20 နေ့စဉ် 6-ဇအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း2s ကိုအားဖြည့်အချိန်ဇယားကို timeout ။ တိရစ္ဆာန်များထို့နောက် FR5 ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်တစ်ဦးအပိုဆောင်း 20 နေ့စဉ် 5-ဇအစည်းအဝေးများများအတွက်အားဖြည့်များ၏2့အချိန်ဇယားကို timeout ။ ကိုကင်းတာဟာမူးယစ်ဆေး-တွဲလီဗာအထက်တစ် cue အလင်း၏အိမ်တော်အလင်းနှင့် illumination ၏ရပ်စဲနှင့်အတူ5s ကိုတစ်ပြိုင်တည်းအပ်ခံခဲ့ရသည်။
Quinpirole [(-) - Quinpirole Hydrochloride] နှင့်ကင်း Hydrochloride Sigma (စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ အားလုံးမူးယစ်ဆေးမြုံ-filtered ဇီဝကမ္မ (0.9%) ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor ဒေတာ (ရောင်ခြည်လပ်ချိန်) quinpirole အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူ 2-Factor ရောထွေးဒီဇိုင်း ANOVA အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် (HD ကို2 နှင့် ld2အချက်များအဖြစ်) နှင့်ကိုကင်းထိုး (5 & 15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ။ ကိုကင်းဖိအား၏ quinpirole sensitivity ကို၏ရှင်းပြနိုင်စွမ်းကိုဖေါ်ထုတ်ရန် Line Regressions ကိုလည်း locomotor ဒေတာပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ နေရာပြုပြင်ခြင်းအချက်အလက်များ (CPP ရမှတ် = မူးယစ်ဆေးဝါးတွဲအနုတ်ဆားငန်ပါ ၀ င်မှုကို) quinpirole အုပ်စု (HD) ပါ ၀ င်သည့်အချက် ၂- ချက်ပါရောနှောထားသော ANOVA ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်2 နှင့် ld2) နှင့်အေးစက် (Pre-အေးစက်နဲ့ Post-အေးစက်) အချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုဒေတာ (ကိုကင်းတာဟာ) quinpirole အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူတစ်ဦး 2-Factor ရောထွေးဒီဇိုင်း ANOVA နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် (HD ကို2 နှင့် ld2) နှင့်အချက်ဒါမှမဟုတ် quinpirole အုပ်စုများအကြားလွတ်လပ်သော t-စမ်းသပ်မှု (HD ကိုအဖြစ်ရက်ပေါင်း2 နှင့် ld2) ကိုကင်းတာဟာရက်ပေါင်းဖြတ်ပြီးပြိုကျခဲ့ကြသည့်အခါ။ အားလုံးကိစ္စများတွင်သိသာထင်ရှားသောအဓိကနှင့်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရိုးရှင်းသောသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနဲ့ post hoc စမ်းသပ်မှု (အရေးပါမှု၏ Bonferroni ရဲ့စမ်းသပ်မှု) ကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုမှာ preset ခဲ့သည် p
အမြင့်နှင့်အနိမျ့ Quinpirole ထိခိုက်လွယ်မှုအဖွဲ့များ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ
အပြောင်းအလဲတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ဒီဂရီကို (အတွင်း-session ကိုထိုးတုံ့ပြန်မှု locomotor လှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီ quinpirole ထိုးဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်အတွက်ရှိပါသည်ပုံ S1) ။ ယေဘုယျအားဖြင့် quinpirole ၏နိမ့်ဆုံးထိုး (0.1 SC / ကီလိုဂရမ် mg) တုံ့ပြန်မော်တော်ယာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရွေ့လျားဖိနှိပ်ခြင်း, မြင့်မားသောဆေးများ (0.3 နှင့် 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) ရွေ့လျားသက်ဝင်စေနေစဉ်။ ဤသည် quinpirole ၏အနိမ့်ဆေးများယူဆရ D ကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံ quinpirole ထိုးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါသည်2 dopamine ဆိပ်ကမ်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပေါ် autoreceptors quinpirole ဆေးများ D ကိုပြည့်နေပါသည်2 autoreceptors နှင့် postsynaptic D ကိုလှုံ့ဆော်2 receptors , , ။ အကျူးများနှင့် postsynaptic: D များ၏အမူအကျင့်ရှုပ်ထွေးဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်2 အဲဒီ receptor ဆွ, ငါတို့ရှိသမျှသည် quinpirole ဆေးများ (ဖြတ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်ကွေး (AUC) အရထိုဒေသတွင်တွက်ချက်ပုံ S1) ။ အဆိုပါ quinpirole AUC ရမှတ်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ quinpirole sensitivity ကို (HD ကိုသို့တစ်ခုချင်းစီကိုဆောင်များတွင်ခွဲခြားဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်2) နှင့်အနိမ့် quinpirole sensitivity ကို (ld2တစ်ခုလုံးကိုဆောင်များတွင်တစ်ဦးပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအပေါ်အခြေခံပြီး) အုပ်စုများ။ ပုံ 1A နှင့် 1B HD ကိုစပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအောက်ပါအ quinpirole AUC ရမှတ်များဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အုပ်စုဆိုလိုတယ်နှစ်ဦးစလုံးသရုပျဖျော2 နှင့် ld2 အုပ်စုများ။ ပုံ 1C နှင့် 1D အဆိုပါဖြန့်ဝေပြအုပ်စုသည်အသီးအသီး quinpirole ထိုးမှာရွေ့လျားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါအုပ်စုများဖွံ့ဖြိုးဆဲမှာပျမ်းမျှရမှတ်မှသက်ဆိုင်ရာကြွက်ထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးစလုံးပုံဖော်နှင့်ပျမ်းမျှရမှတ်ကနေအကွာအဝေးကိုဆိုလိုတာဖို့ဂရပ်အပေါ်ပြသနေသည်။
ပုံ 1 ။ ld များအတွက် quinpirole-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပျမ်းမျှ2 နှင့် HD ကို2 အုပ်စုများ။
အဆိုပါ ld သို့ကြွက်များခွဲခြားဖို့အသုံးပြုတဲ့မျဉ်းကွေး (AUC) ရမှတ်များအောက်ရှိတွက်ချက် quinpirole ဧရိယာ၏ (က) အုပ်စုဖြန့်ဝေ2 နှင့် HD ကို2 အုပ်စုများ။ အဆိုပါတွေက dotted line ကိုကို (ပျမ်းမျှရမှတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်M = 15460) ။ (ခ) အုပ်စုပျမ်းမျှ (± sem) ကို ld ထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ quinpirole AUC ရမှတ်များ2 နှင့် HD ကို2 အုပ်စုများ။ အဆိုပါတွေက dotted line ကိုကို (ပျမ်းမျှရမှတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်M = 15460) ။ အဆိုပါ ld အတွင်းကွှအတွင်း-session တစ်ခု quinpirole ထိုးတုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း locomotor လှုပ်ရှားမှုရမှတ်၏ (C) ဖြန့်ဖြူး (ရောင်ခြည်လပ်ချိန် / နာရီ)2 (မီးခိုးရောင်စက်ဝိုင်း) နှင့် HD ကို2 (အနီရောင်စက်ဝိုင်း) အုပ်စုများ။ (ဃ) အုပ်စုပျမ်းမျှ (± sem) ကို ld များအတွက် quinpirole ထိုးတုံ့ပြန်မှုကွေး၏2 နှင့် HD ကို2 အုပ်စုများ။
အုပ်စုတာဝန်ကျအဓိကအား postsynaptic: D ၏ quinpirole activation ထုတ်လုပ် locomotor activation လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ကြောင်းပေးထား2 receptors ကျနော်တို့ကိုလည်းအုပ်စုများ quinpirole ၏အနိမ့်, locomotor နှိပ်ကွပ်ထိုးဖို့သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်အတွက်ကွဲပြားရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုချင် (0.1 / ကီလိုဂရမ် mg) ။ အပြည့်အဝအနိမ့် quinpirole ထိုး၏ဖိနှိပ်သက်ရောက်မှု၏ပြင်းအားကိုဖမ်းယူဖို့ကျနော်တို့အခြေခံ (ဆား-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်အဖြစ် quinpirole ၏ဖိနှိပ်ဆိုးကျိုးများတွက်ချက်; ပုံ S2) ။ 0.1 အားဖြင့်ထုတ်လုပ် quinpirole-သွေးဆောင် locomotor ဖိနှိပ်မှုမကွဲပြားမှု t ကို (/ ကီလိုဂရမ် quinpirole MG ရှိခဲ့သည်36 = 1.01, p = 0.3183), အ differential ကို sensitivity ကို၎င်း, HD အကြား quinpirole မှအကြံပြုခြင်း2 နှင့် ld2 တိရစ္ဆာန်များအကြီးအကျယ် postsynaptic: D များ၏ sensitivity ကိုထင်ဟပ်2 DA receptors ။
အမြင့် Quinpirole ထိခိုက်လွယ်မှုတိုးကင်း-သွေးဆောင်စက်ခေါင်းခန့်မှန်း
တုံ့ပြန် quinpirole များအတွက်ပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအုပ်စုတစ်စုတာဝန်တွေအသုံးချဖို့ကျနော်တို့ quinpirole sensitivity ကိုကိုကင်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုသက်ဝင်သည့် locomotor နှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ပုံ2ကြောင်း HD ကိုသရုပ်ဖော်2 တိရစ္ဆာန်များအတွက် 15 အောက်ပါ သာ. ကွီးမွတျကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းထိုး MG ပေမယ်5မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းထိုးအောက်ပါမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးက Two-လမ်းရောထွေးဒီဇိုင်း ANOVA ကင်းထိုးခြင်းနှင့် quinpirole အုပ်စုသည် (က F အကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်ထုတ်ဖေါ်1,36 = 7.17, p = 0.0111), နှင့်ကိုကင်းများ၏အဓိကသက်ရောက်မှု (F ကို1,36 = 88.43, p <0.0001) နှင့်အုပ်စု (က F1,36 = 6.86, p = 0.0128) ။ ပုံ2ထို့အပြင်တိရိစ္ဆာန်များ၏တစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီကိုကင်းထိုးမှာဖျော်ဖြေ linear Regression ၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ quinpirole sensitivity ကိုနှင့် 15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုး (က F ရှိခဲ့သည်1,36 = 8.62, p = 0.0058), မဟုတ်5မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု (F ကို1,36 = 1.91, p = 0.1761) ။ ထို့ကြောင့်ကနဦး quinpirole sensitivity ကိုကိုကင်း၏မြင့်မားသော, locomotor ကိုသက်ဝင်ထိုးဖို့ကိုကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ပုံ2။ HD ကို2 တိရိစ္ဆာန်များကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပိုမို sensitivity ကိုဖော်ပြရန်။
(က) သည်အထိတစ်ဦးအတွင်း-session တစ်ခုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက် (5 နှင့် 15 / ကီလိုဂရမ်, ip mg) နှစ်ခုကင်းဆေးများကိုဖြတ်ပြီးစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ HD ကို2 တိရိစ္ဆာန်များမီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းပေမယ့်မပေး 15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း5မှသိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပြသ။ * HD ကို2 ld ကနေသိသိသာသာ2, p <0.05 (B နှင့် C) တစ်ခုလုံးကိုဆောင်များတွင်၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း quinpirole AUC ရမှတ်များနှင့်ကိုကင်း - သွေးဆောင် locomotion အကြားဆက်ဆံရေးဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်း - သွေးဆောင်မှုအတွက်ဆေးပမာဏနိမ့် (ခ၊ ၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) တွင်သိသိသာသာကောင်းမွန်သောအပြုသဘောဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးသိသိသာသာကောင်းသောအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုကိုကင်း - မြင့်မားစွာထိုးထားသော (ကို၊ ၁၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း) ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ) ။
ယခင်အလုပ်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားတုံ့ပြန်အနာဂတ်ကင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကြောင်းပြသ , ။ ld အကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏လျှင်ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သအကဲဖြတ်ရန်လိုခငျြ2 နှင့် HD ကို2 အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအုပ်စုများ။ အဆိုပါ HD ကိုအကြားခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့2 နှင့် ld2 တစ်ခုလုံးကို session ကိုဖြတ်ပြီးအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားအတွက်အုပ်စုများ (ပုံ 3A: t36 = 0.44, p = 0.6601) သို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံး 30-60 မိနစ်အတွင်း (ပုံ 3B), ရသောအခါအသစ်အဆန်းတုန့်ပြန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပုံမှန်အားဖြင့်အများဆုံးကြံ့ခိုင်ဖြစ်ကြသည်။ အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု: D ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ဖို့2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကိုကျနော်တို့အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောဖြစ်စေရှိခြင်းသောကြောင့်ကြွက်-သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုပြန်လည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့စမ်းသပ်ခြင်း၏လေ့အဆင့်စဉ်အတွင်း locomotor စမ်းသပ်ခြင်းယန္တရား၎င်းတို့၏ကနဦး locomotor တုန့်ပြန်တဲ့ပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအပေါ်အခြေခံပြီးအနိမ့်တုံ့ပြန်ကြွက် (LR) နှင့်မြင့်မားသောတုံ့ပြန်ကြွက် (HR) ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အဲဒီအုပျစုမြား quinpirole-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံ 3F ကို: LR နဲ့ HR ကြွက်ဟာ quinpirole ဆေးများ (Group ၏မည်သည့်အချိန်တွင်သိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး1,108<1, NS; Quinpirole: F3,108 = 69.61, p <0.0001; အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု: (F3,108<1, NS) အုပ်စုများကိုကင်း - သွေးဆောင်ရွေ့လျားမှု (အုပ်စု - F) တွင်သိသိသာသာကွဲပြားသော်လည်း1,36 = 10.49, p = 0.0026; ကိုကင်း: F ကို1,36 = 84.86, p <0.0001; အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု: (F1,36 = 5.02, p = 0.0313) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားကင်းတုန့်ပြန်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်နေစဉ်, ဒီဆကျဆံရေးဆက်စပ်ယန္တရားများ D နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကိုထံမှကွဲပြားစေခြင်းငှါအကြံပြု2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို။
ပုံ3။ Quinpirole sensitivity ကိုအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်မပေးပါ။
စမ်းသပ်ခြင်း၏လေ့အဆင့်စဉ်အတွင်းအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားစစ်ဆေးအကဲဖြတ် ld အကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှား2 နှင့် HD ကို2 အုပ်စုများ။ (A) ကို 2-နာရီကိုစမ်းသပ်ကာလအတွင်းအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုရမှတ်များဖြန့်ဖြူး။ အဆိုပါ ld အကြားအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ (ခ) အချိန်သင်တန်း2 နှင့် HD ကို2 အုပ်စုများ။ ဒီအုပ်စုထဲမှာကနေတိရိစ္ဆာန်များဟာသူတို့ရဲ့အသစ်အဆန်း - သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးအနိမ့်တုံ့ပြန်အုပ်စု (LR) နှင့်မြင့်မားသောတုံ့ပြန်အုပ်စု (HR) သို့ပြန်လည်ခွဲခြားခဲ့သည်။ (ဂ) LR နှင့် HR ကြွက်များသည် quinpirole ထိုးတုန့်ပြန်မှုစမ်းသပ်မှုအနှံ့ locomotor လုပ်ဆောင်မှုတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကြိုတင်မခန့်မှန်းခဲ့ပါ။ ()) HR ကြွက်များသည်နှစ် ဦး စလုံးကိုကင်းဆေးများကို ဖြတ်၍ ကိုကင်း - သွေးဆောင်နိုင်သောစက်ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြသသည်။ LR, p <0.05 ကနေ * သိသာ HR ။
ကိုကင်းဖို့ကနဦး locomotor တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုလည်းနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောဖြစ်စေကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော် re-သွင်ပြင်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွက်, ကိုကင်းဆုလာဘ်များနှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, ကိုကင်းအကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်အတူကိုက်ညီတဲ့ပြခဲ့ကြပြီးကတည်းက , , , ။ ဤသည် Re-စရိုက်လက္ခဏာတွေဟာအတွင်း-session ကိုကိုကင်းဆေးထိုးတုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းဆေးများကိုဖြတ်ပြီးကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားများအတွက် AUC တွက်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ အဆိုပါပျမ်းမျှအထက်ရှိသူများရှိခြင်း AUC တန်ဖိုးများမြင့်မားကိုကင်းတုံ့ပြန် (HCR) အုပ်စုတွင်နေရာချပေးခဲ့သည်နေစဉ်ပျမ်းမျှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော AUC တန်ဖိုးများရှိခြင်းကြွက်နိမ့်ကိုကင်းတုံ့ပြန် (LCR) အုပ်စုတွင်နေရာချပေးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ကနဦးကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျား quinpirole-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ HCR ကြွက်ဟာ quinpirole AUC ရမှတ် (t ကို အသုံးပြု. LCR ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သာ. ကြီးမြတ်ခြုံငုံ quinpirole-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့36 = 3.585, p <0.0010, ဒေတာကိုပြမ) ။ quinpirole ထိုးတုံ့ပြန်မှုစမ်းသပ်ဖြတ်ပြီးလှုပ်ရှားမှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဤကွဲပြားခြားနားမှုမူလတန်း quinpirole ဆေးများကိုသက်ဝင် locomotor မှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်အကြံပြုထားသည် (ပုံ 4) ။ ထို့ကြောင့်အုပ်စုများအကြား quinpirole ထိုးတုံ့ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (F ကိုအုပ်စုသိသိသာသာအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှား1,108 = 14.05, p = 0.0006), quinpirole ထိုး (F ကို3,108 = 85.93, p <0.0001) နှင့်အပြန်အလှန် (F3,108 = 7.64, p = 0.0001) ။ ငါတို့သည်လည်းနှစ်ခုလှုပ်ရှားမှုရမှတ် (အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ရှိခဲ့သည်ရှိရာတစ်ဦးစီမူးယစ်ဆေးများအတွက် AUC ရမှတ်များသုံးပြီးအလုံးစုံကိုကင်း sensitivity ကိုနှင့် quinpirole sensitivity ကိုကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်ပုံ 4) ။ အတူတူကဤတွေ့ရှိချက်ကနဦးကင်း sensitivity ကိုများနှင့်ကနဦး quinpirole sensitivity ကိုအကြားသိသာထင်ရှားသောထပ်တူရှိကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပုံ4။ ကနဦးကင်း sensitivity ကို: D အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ကိုက်ညီ2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို။
ကွေးအောက်ရှိ(ရိယာကို (၅) နှင့် ၁၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးတွင်ကြွက်တစ်ကောင်ချင်း၏ကိုကာကိုလာကိုဖြစ်ပေါ်စေသော locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်တွက်ချက်သည်။ ကန ဦး ကိုကာကိုလာအားကစားလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဤတွက်ချက်ထားသောရမှတ်ကိုအသုံးပြုပြီးကြွက်များကိုကိုကင်းဓာတ်နည်းသောတုံ့ပြန်အုပ်စု (LCR) နှင့်ကိုကင်းတုန့်ပြန်သောအုပ်စု (HCR) အဖြစ်သို့ပြန်လည်ခွဲခြားခဲ့သည်။ (က) HCR ကြွက်များသည် ၀.၃ နှင့် ၁.၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဆေးများအရ quinpirole- သွေးဆောင်စက်ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြသသည်။ LCR မှသိသာသော HCR p <5 ။ (ခ) AUC ရမှတ်များနှင့် quinpirole AUC ရမှတ်များနှင့်ကိုကင်း AUC ရမှတ်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အဖွဲ့လိုက်တစ်ခုလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ သိသိသာသာအပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုကိုကန ဦး quinpirole sensitivity နှင့် awal ကင်းကင်း sensitivity အကြားဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
အမြင့် Quinpirole ထိခိုက်လွယ်မှုတိုးကင်းဆုကြေးခန့်မှန်း
တိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင်ခုနှစ်တွင် quinpirole များအတွက်ပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအုပ်စုတစ်စုတာဝန်တွေဖန်တီးခဲ့တုံ့ပြန် (Data မှမပြ) နှင့်ကိုကင်းဘို့အေးစက်နေရာ (7.5 / ကီလိုဂရမ် mg) ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခိုင်မာတဲ့နေရာအရပ်အေးစက်ထုတ်လုပ်ရန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာထိုးဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပုံ5အဆိုပါ 30 မိအေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း saline- နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားနှစ်ဦးစလုံးဖော်ပြသည်။ ဆား-သွေးဆောင်ရွေ့လျားမအရေးပါသောအုပ်စုတစ်စုခြားနားချက် (F ကိုရှိခဲ့သည်1,66 = 0.51, p = 0.4784) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအေးစက် session တစ်ခု (F ကိုဖြတ်ပြီးဆား-သွေးဆောင်ရွေ့လျားအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းရှိခဲ့သည်2,66 = 10.91, p <0.0001) အုပ်စုများနှင့်အစည်းအဝေးများ (F ကိုအကြားမျှသိသာအပြန်အလှန်ရှိခဲ့သည်ပေမယ့်2,66 = 0.59, p = 0.5567) ။ HD ကို2 ကြွက် ld နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါအေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ကိုကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားခဲ့2 ကြွက် (F ကို1,66 = 4.29, p = 0.0462) ။ session ရဲ့အဘယ်သူမျှမအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F ကိုရှိခဲ့သည်2,66 = 0.77, p = 0.4595) နှင့်မျှသိသာအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု (F ကို2,66 = 0.60, p = 0.5535), သှေးအဲဒီမှာပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုအေးစက်အစည်းအဝေးများ (စဉ်အတွင်းကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအားထင်ရှားပေမယ့်ပုံ 5) ။ HD မှာကြီးထွားကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျား2 အဆိုပါအေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းတိရိစ္ဆာန်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက်များ (recapitulatesပုံ 2) နှင့်ကြောင်း HD ကိုညွှန်ပြ2 တိရိစ္ဆာန်များကိုကင်းများ၏ locomotor လှုံ့ဆော်ဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်ကြပြီးကြောင်းကိုကင်းဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုဆောင်များတွင်ကင်းများအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်သောအခါ, ကင်း-တွဲအခန်း Post-အေးစက် (t အတွက်သုံးစွဲကာလ၌သိသိသာသာတိုးရှိခဲ့36 = 2.27, p = 0.0295) ။ အဖွဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်အခါ, အေးစက်၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F ကိုရှိခဲ့သည်1,34 = 6.31, p = 0.0169), နောက်တဖန်ခြုံငုံ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်ကင်း-တွဲအခန်းများအတွက် preference ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးကြောင်းအကြံပြု။ အဘယ်သူမျှမအုပ်စုတစ်စုအကျိုးသက်ရောက် (F ကိုရှိခဲ့သည်1,34 = 3.27, p = 0.0793), ဒါပေမယ့်အေးစက်နှင့်အဖွဲ့ကိုအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန် (F ကိုရှိခဲ့သည်2,34 = 4.36, p = 0.0443) ။ နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် HD ကိုထုတ်ဖော်ပြသ2 တိရိစ္ဆာန်များ ld နှိုင်းယှဉ်မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း 7.5 ပိုမို conditional ရာအရပျ preference ကိုပြသ2 Post-အေးစက်စမ်းသပ်မှု (t အပေါ်တိရိစ္ဆာန်များ34 = 2.33, p = 0.0258), ဒါပေမယ့် Pre-အေးစက်စမ်းသပ်မှု (t အပေါ်ကွဲပြားဘူး34 = 0.31, p = 0.7619) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကနဦး quinpirole sensitivity ကို heighted ကင်းဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပုံ5။ HD ကို2 တိရိစ္ဆာန်များကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုပိုမို sensitivity ကိုဖော်ပြရန်။
(A) ကိုအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းဆား-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုမအုပျစုကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ (ခ) ကိုကင်း-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအုပ်စုတစ်စုခြားနားချက်ဘယ်မှာ HD ကိုပုအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းရှိခဲ့သည်2 တိရစ္ဆာန်များအားလုံး session ကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပြသ။ * HD ကို2 ld ကနေသိသိသာသာ2, p <0.05 ။ (ဂ) အလွှာရှိသတ္တဝါအားလုံး၏ဆန်းစစ်ခြင်းများကအေးစက်ပြီးနောက်သိသာထင်ရှားသောကျိုးနွံသောကိုကင်း - သွေးဆောင်ရာနေရာကိုကြိုက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ †ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေဖြင့်သိသာ Post- အေးစက်, t36 = 2.27, p = 0.0295 ။ (ဃ) အုပ်စုဟာ HD မှာသရုပ်ပြသာတိရိစ္ဆာန်များကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး2 အဖွဲ့ ld အတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုနှိုင်းယှဉ်သည့်ကိုကင်း-တွဲအခန်းများအတွက်သိသာထင်ရှားသော preference ကိုတီထွင်2 အဆိုပါကင်း-တွဲအခန်းမဆိုသိသာအေးစက်ဖွံ့ဖြိုးမအုပ်စုသည်။ * HD ကို2 ld ကနေသိသိသာသာ2, p <0.05 ။
အမြင့် Quinpirole ထိခိုက်လွယ်မှုတိုးကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဟောကိန်းထုတ်
တိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင်ခုနှစ်တွင် quinpirole များအတွက်ပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအုပ်စုတစ်စုတာဝန်တွေဖန်တီးခဲ့တုံ့ပြန်နှင့် sucrose သို့မဟုတ်ကင်းဖြစ်စေ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ပုံ6sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေး (F ၏ဝယ်ယူမအုပျစုကွာခြားချက်ရှိကွောငျးကိုသရုပ်ဖော်1,176 = 0.39, p = 0.5406) နှင့်ညီမျှသောဝယ်ယူနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ (Sessions: F ကို8,176 = 18.00, p <0.0001; × Session Interaction အဖွဲ့ - F8,176 = 1.81, p = 0.0775) ဤအုပ်စုများအနေနဲ့အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်သင်ယူမှုအတွက်ကွာခြားမအကြံပြုခြင်း။ ဤရွေ့ကားအတူတူပင်တိရိစ္ဆာန်များထို့နောက်နာတာရှည် indwelling ပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များကနဦးအနေနဲ့ FR 1 အချိန်ဇယားအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ HD ကိုများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည်2 ရန် ld ထက်ပိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲ2 အားလုံးအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦး FR 1 အချိန်ဇယားအပေါ်တိရိစ္ဆာန်များ (F ကို1,95 = 3.31, p = 0.0846) ။ အစည်းအဝေးများ, HD, ရှိသမျှ FR 1 အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှကြသောအခါ2 တိရိစ္ဆာန်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသိသိသာသာ ld ထက်ပိုကင်း2 တိရိစ္ဆာန်များ (t19 = 2.63, p = 0.0164, ဒေတာပြမပါ) ။ အချိန်ဇယားအားဖြည့် HD ကိုတစ်ဦး FR5အချိန်ဇယားကိုမှအဆင့်မြင့်ခဲ့သည့်အခါ2 သိသိသာသာအပြန်အလှန် (F ကိုအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုပိုပြီးကင်း4,76 = 3.465, p = 0.0118), အားလုံး FR5အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှတဲ့အခါမှာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုရှုလေ့လာမခံခဲ့ရပေမယ့် (t19 = 1.51, p = 0.1484, ဒေတာပြမပါ) ။ ထို့ကြောင့်တိုးမြှင်ကနဦး quinpirole sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ကင်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ပုံ6။ HD ကို2 တိရိစ္ဆာန်များ ld ထက် Self-စီမံခန့်ခွဲပိုပြီးကင်း2 တိရိစ္ဆာန်များ။
(က) sucrose လုံးလေးများဆည်းပူးရန်အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုများဝယ်ယူမအုပျစုကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ (ခ) တစ်ဦး fixed အချိုး 1 နှင့်အားဖြည့်များ၏ fixed အချိုး5အချိန်ဇယားကိုနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ကိုအပ်ကင်းတာဟာများ၏အရေအတွက်သိသိသာသာအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ #HD ကိုအကြားသိသာထင်ရှားသောလမ်းကြောင်းသစ်2 နှင့် ld2 အုပျစု, p = 0.08, *, HD2 ld ကနေသိသိသာသာ2, p <0.05 ။
ကိုကင်းနှစ်ဦးစလုံး HD မှာ Quinpirole ထိခိုက်လွယ်မှုအားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း2 နှင့် ld2 တိရစ္ဆာန်များ
ဒါဟာကောင်းစွာနာတာရှည်ကင်းကုသ: D များ၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်မြဲမြံစွာတည်နေသည်2 DA receptors , , , ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့: D အတွက် Pre-ရှိပြီးသားကွဲပြားမှုရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် quinpirole sensitivity ကိုစမျးသပျ2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကိုနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါတည်မြဲမှု။ ဤသည်တို့ကြောင့်ပြွန်ပျက်ကွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသောသူအပေါင်းတို့ပေမယ်3တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ပုံ7ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြိုတင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတူတိရစ္ဆာန်များအတွက်တုံ့ပြန်နဲ့နှိုင်းယှဉ် quinpirole-သွေးဆောင်ရွေ့လျားပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ရောထွေး ANOVA ကင်းထိတွေ့မှု (F ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးကိုထုတ်ဖော်ပြသနေတဲ့ Two-လမ်း1,104 = 17.46, p <0.0001) နှင့် quinpirole ဆေးထိုး (F2,104 = 66.73, p <0.0001) ။ သိသိသာသာအပြန်အလှန် (F2,104 = 10.61, p <0.0001) ။ အလားတူရလဒ်များကိုကင်းထိတွေ့မှုမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ထုတ်လုပ်သည့် quinpirole AUC ရမှတ်များ အသုံးပြု၍ ရရှိခဲ့သည်24 = 5.56, p <0.0001) ။ ငါတို့သည်လည်း HD အကြားခြားနားချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ2 နှင့် ld2 ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမီနှင့်အပြီး quinpirole sensitivity ကိုအပေါ်အုပ်စုများ (ပုံ 7) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ Pre-ရှိပြီးသားအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှု: D ထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်မှုများရှိနေသော်လည်းကျန်ရစ်2 နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်အဲဒီ receptor sensitivity ကို။ ထို့ကြောင့်က F (အုပ်စုတစ်စု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ထုတ်ဖေါ်လေ့လာဆန်းစစ်3,98 = 24.21, p <0.0001), quinpirole ဆေးထိုး (F2,98 = 117.50, p <0.0001) နှင့်အပြန်အလှန် (F6,98 = 16.03, p <0.0001) ။ အလားတူစွာရလဒ်များကိုလည်းကိုကင်းထိတွေ့မှုမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ထုတ်လုပ်သည့် quinpirole AUC ရမှတ်များကို အသုံးပြု၍ ရရှိခဲ့သည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအုပ်စု (F ။ ) ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်ဖေါ်1,23 = 46.05, p <0.0001) နှင့်ကိုကင်းထိတွေ့မှု (F1,23 = 36.26, p <0.0001), ဒါပေမယ့်မအပြန်အလှန် (F1,23 = 3.45, p = 0.0760) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပင်ကြိုတင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်အနာဂတ်ကင်းဟောကိန်းထုတ်ရန် quinpirole sensitivity ကိုသော်လည်း, နှစ်ဦးစလုံးလူဦးရေ quinpirole လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အောက်ပါကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးသော။ အကြံပြု
ပုံ7။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး D ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်2 နှစ်ဦးစလုံး ld အတွက် DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို2 နှင့် HD ကို2 ကြွက်များ။
(က) ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်စမ်းသပ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်စုစုပေါင်းအားလုံးတွင် Quinpirole AUC ရမှတ်များတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ * ကိုကင်းမှီ, p <0.05 (B) မှသိသိသာသာကိုကင်းပြီးနောက်အလားတူ, ဒီတိုးမြှင့်အားလုံး quinpirole ဆေးများဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ * ကိုကင်းမှီမှသိသိသာသာကိုကင်းပြီးနောက် p <0.05 ။ (ဂနှင့် D) D တွင်ကိုကို - သွေးဆောင်တိုးမြှင့်မှုများ2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကိုပု ld နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သိသာခဲ့ကြသည်2 နှင့် HD ကို2 quinpirole AUC ရမှတ်များနှင့် quinpirole ထိုးတုံ့ပြန်မှုကွေးဖြတ်ပြီးကုန်ကြမ်း locomotor ရမှတ်နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုပြီးအုပ်စုများ။ * ကိုကင်းမှီမှသိသိသာသာကိုကင်းပြီးနောက် p <0.05 ။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာကိုကင်းနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်၌ပင်အုပ်စုကွဲလွဲမှုများဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ † HD2 ld ကနေသိသိသာသာ2, p <0.05 ။
ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံတွေ့ရှိချက် quinpirole ဖို့ locomotor တုန့်ပြန်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူစည်းမျဉ်းများကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒီအကြောင်း: D များ၏ sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပထမဦးဆုံးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်2 DA receptors differential ကိုကိုကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျား, နေရာ preference ကိုနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြိုတင်ခန့်မှန်း။ HD ကိုအဖြစ်ခွဲခြားအဆိုပါကြွက်များ2, ကုသ quinpirole တုံ့ပြန်မြင့်မား locomotor activation ရှိခြင်း, တိုးမြှင့်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြ, ld အဖြစ်ခွဲခြားကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သာ. ကြီးမြတ်ပမာဏသာရှိကိုကင်းဆုလာဘ်များနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းတိုးလာ2 quinpirole တုံ့ပြန် locomotor activation လျော့ကြပြီ။ HD ကိုအရေးကြီးအုပ်စုခွဲ2 နှင့် ld2 တုံ့ပြန်ကင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပြပွဲခဲ့သည့်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်၏တူးဖော်ရေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု Parallel ခဲ့ပါဘူး။ ၎င်းတို့၏ကနဦးကင်း sensitivity ကို (HCR နဲ့ LCR) အပေါ်အခြေခံပြီးကြွက် Categorizing quinpirole sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားမှုနှစ်ခုအမူအကျင့်လက္ခဏာများအကြားတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအခြေခံဘုံယန္တရားများရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းနှင့်အတူကိုက်ညီတဲ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ HD ကို၏အမျိုးအစားကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်2 နှင့် ld2 ယူဆရ presynaptic D ကိုကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းရွေ့လျား၏ quinpirole-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုနှင့်အတူကိုက်ညီမပြုခဲ့2 DA အဲဒီ receptor ဆွ , , ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သသော HD ကိုသံသယ2 နှင့် ld2 quinpirole ရွေ့လျားအုပ်စုစရိုက်လက္ခဏာတွေဖွယ်ရှိ postsynaptic: D များ၏ sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုထင်ဟပ်2 DA receptors ။ သို့သော် quinpirole လည်း D: မှာအချို့ selection နှင့်အတူအပြန်အလှန်မှလူသိများသည်3 DA receptors ။ တကယ်တော့ဒါဟာ quinpirole ၏အနိမ့်ဆေးများ D နဲ့သူ့ရဲ့အပြန်အလှန်မှတဆင့်အထီးကြွက်များတွင်တိုးချဲ့ပါးစပ်အပြုအမူနှင့်ဟနေခြင်းအပြုအမူသွေးဆောင်ကြောင်း postulated ထားပြီး3 DA receptors , ။ ကျွန်တော် quinpirole-သွေးဆောင်ရွေ့လျားမှနျးစဉ်ထို့ကြောင့် postsynaptic: D ၏ရောင်ပြန်ဖြစ်ပါသည်2 DA အဲဒီ receptor ဆွပါက D: ဖြစ်နိုင်သည်3 DA receptors quinpirole ဖို့အမူအကျင့်တုန့်ပြန်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ mesocorticolimbic DA circuitry အတွင်း ALTER ရှည်လျား psychostimulant အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး predisposing အချက်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant အသုံးပြုမှု၏အကျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးအဖြစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ အဆိုပါ: D2 DA အဲဒီ receptor အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး D ကိုလျော့နည်းစေကြောင်းကြောင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုထူးခြားသောငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်2 အဆိုပါ striatum အတွက် binding DA အဲဒီ receptor, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်ဤအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းအကြံပြု ။ သို့သော်အထောက်အထားနဲ့အခြားလိုင်းများကြောင်း: D အကြံပြု2 DA အဲဒီ receptor စကားရပ်ကိုလည်းအားနည်းချက်အချက်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် methylphenidate များအတွက်ရမှတ်များ "like နှိပ်" အဆင့်မြင့်မူးယစ်အစီရင်ခံကြောင်း Non-စွဲတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း D ကို၏အောက်ခြေအဆင့်ခဲ့2 အဆိုပါ striatum အတွင်း DA receptors ။ တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်းက D ကို Over-ဖော်ပြကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်2 အဆိုပါ ventral striatum အတွက် DA အဲဒီ receptor ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေ ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်: D ၏စကားရပ်အကြံပြု2 ပေမယ့်မလေ့လာမှုလိပ်စာဘယ်လို: D များ၏ sensitivity ကို DA receptors အနာဂတ်ကင်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းငှါ2 DA အဲဒီ receptor psychostimulants ဖို့တုန့်ပြန်နှင့်အတူကိုက်ညီလိမ့်မည်။
metabotropic receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဆင့်ဆင့် intracellular အချက်ပြခြင်းနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆယ်လူလာလှုပ်ရှားမှုအစပျိုးဖို့အဲဒီ receptor ၏ sensitivity ကိုထံမှ dissociated နိုင်အကြံပြုခြင်းသက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, dissociation ကင်းတဲ့မူးရူးကဲ့သို့အုပ်ချုပ်ရေးတွင်အောက်ပါကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်: D အတွက်လျော့နည်းစေ2 DA အဲဒီ receptor B ကိုmax ကို : D တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအကြံပြုခြင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်2 မူးရူးကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ DA အဲဒီ receptor စကားရပ်, G ပရိုတင်းကို Activation အတွက် concomitant တိုး: D တုံ့ပြန်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်စဉ်2 ဤအတူညီတိရိစ္ဆာန်များအတွက် DA အဲဒီ receptor ဆွ ။ ဤသည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့: D ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတိုးပွါးသောအယူအဆနှင့်အတူကိုက်ညီ2 သေချာပေါက်: D များ၏ခြုံငုံစကားရပ်လွှမ်းမိုးခြင်းမရှိဘဲ DA receptors2 DA receptors ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများ D ကိုရန်မူအကျင့် sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအကြံပြု2 DA အဲဒီ receptor ဆွကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျား, ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်ဖို့တုန့်ပြန်ခန့်မှန်း။ ပိုမိုမြင့်မား D နဲ့အထူးသတိရိစ္ဆာန်များ2 ဒါကြောင့်မြင့်မားသောကြောင့်ဆှဖှေဲ့ပိုမိုထုတ်ဖော်ရှိမရှိ DA အဲဒီ receptor အပြုအမူ sensitivity ကို, D ကို2 DA receptors, ပိုကောင်း, G ပရိုတင်းကို Activation သို့မဟုတ်အခြားဆယ်လူလာယန္တရား, သာ. ကြီးမြတ်ကင်း sensitivity ကို, ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်ဖို့တိရိစ္ဆာန်များ predisposes ။ HD ကိုရှိမရှိဒါဟာအတိအကျမသိရသေးဖြစ်နေဆဲ2 နှင့် ld2 ကြွက်: D ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်ကွာခြား2 DA receptors နှင့် / သို့မဟုတ်, G ပရိုတင်းကို Activation ။
မူးယစ်ဆေး sensitivity ကိုတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး, စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူပြောင်းလဲမှုဆုလာဘ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအားနည်းချက်အချက်များဆုံးဖြတ်ရန်ရှည်-ရပ်တည်မှုချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ အများဆုံးထူထောင်တိရိစ္ဆာန်များမော်ဒယ်များတစ်ခုမှာအသီးသီးအနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောန (LR သို့မဟုတ် HR, တစ်ခုခုအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များခွဲခြားဖို့ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်ဖို့လေ့တုံ့ပြန်မှုအသုံးချ; ) ။ LR ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤမော်ဒယ်များတွင် HR ကြွက်စူးရှသောကိုကင်းဖို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သော locomotor တုံ့ပြန်မှုပြနှင့်ပိုပြီးအလွယ်တကူ psychostimulants ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနိမ့်ဆေးများ , , , ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် LR ကြွက်လည်း D: ထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြရန်2 HR ကြွက် B ကိုယုတ်လျော့ပါပြီဘယ်မှာ DA အဲဒီ receptor စကားရပ်max ကို of 3H-raclopride binding နှင့် D ကိုအတွက်2 နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DA အဲဒီ receptor mRNA ။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှု D ကိုရန်မူအကျင့် sensitivity ကိုတွင်ထင်ဟပ်ကြသည်မဟုတ်2 DA အဲဒီ receptor ဆွကျနော်တို့ယခင်ရလဒ်များကိုအတည်ပြု quinpirole-သွေးဆောင်ရွေ့လျားအတွက် HR နဲ့ LR ကြွက်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူးကတည်းက ။ ဆနျ့ကငျြဘ, ကြွက်ရွေးချယ်အသစ်အဆန်းမှတုန့်ပြန်အတွက်ကွဲပြားမှုအဘို့အရပ်ကြီးရာတခုအလားတူလေ့လာမှုမှာမြင့်မားအသစ်အဆန်းနမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ D ကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအချိုးအစားပြသ2 receptors , ။ မြင့်မားသောအသစ်အဆန်းတုန့်ပြန်ဘို့အရပ်ကြီးကြွက်လည်းကင်း-related တွေကိုနှင့်တိုးမြှင်အပြုအမူ disinhibition ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်အချို့ကိုကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်မှတုန့်ပြန်တိုးလာ, သာ. ကြီးမြတ် quinpirole sensitivity ကိုပြသ။ ဒါဟာ: D အတွက် HR နဲ့ LR ကြွက်အကြားခြားနားချက်များရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါသည်2 DA အဲဒီ receptor စကားရပ်: D နှစ်ခုလုံးလူဦးရေအတွက် Pre-Synaptic သို့မဟုတ် Post-Synaptic ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်2 DA receptors ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအ HR ကြွက်: D ၏ subsensitivity ဝင်စားကြောင်းသတင်းပေးပို့2 အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ autoreceptors သို့သော်သူက Post-Synaptic: D များ၏ sensitivity ကိုရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး2 အဆိုပါ striatal terminal ကိုတိုင်းဒေသကြီးများတွင် DA receptors အဆိုပါ HR နဲ့ LR ကြွက်အကြားကွဲပြားခြားနားသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကျွန်တော်သံသယယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ထဲမှာရှေ့နောက်မညီအချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ D ကိုပြုလုပ်ပေးထား2 DA အဲဒီ receptor အုပ်စုတစ်စုစရိုက်လက္ခဏာတွေဖွယ်ရှိအသစ်အဆန်းများနှင့်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ယေဘူယျ locomotor တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်ကွဲပြားယန္တရားများနှင့်အတူကိုက်ညီ။
နောက်ထပ်, တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်ပိုမိုမကြာသေးမီကတီထွင်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ် HCR နဲ့ LCR ကြွက်ဆုံးဖြတ်ရန်ကင်းဖို့ကနဦး locomotor တုံ့ပြန်မှုအသုံးချ ။ ဒါကမော်ဒယ် LCR ကြွက်များကိုကင်းအကဲဆတ်ခြင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖော်ပြရန်မြဲမြံစွာတည်ထားပြီး ကိုကင်းဖို့, မြှင့်တင်ရန် conditional ရာအရပျ preference ကို နှင့် HCR ကြွက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားတိုးတက်သောအချိုး breakpoints အားရှိ ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုကင်းဖို့အနိမ့်ကနဦးတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များကိုကင်းစွဲဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့က HD ကိုလေ့လာတွေ့ရှိ2 ကြွက် ld နှိုင်းယှဉ်ကင်းဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ကနဦးတုံ့ပြန်မှုရှိသည်, ပိုပြီးအလွယ်တကူကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့် fixed အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ် Self-စီမံခန့်ခွဲပိုပြီးကင်း2 ကြွက်များ။ အဆိုပါ HCR / LCR စရိုက်လက္ခဏာတွေသုံးပြီးသူတို့အားကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ပြန်ပြောပြဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကျနော်တို့ကသူတို့ကနဦးကင်း locomotor တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်များ-သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုပြန်လည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ HCR ကြွက်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့: D ခဲ့ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ2 LCR ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို။ ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့: D ကွောငျးတှေ့ကတညျးကဤတွေ့ရှိချက်များအတန်ငယ်ဆနျ့ကငျြနေမြဲနေစဉ်2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို (ဥပမာပိုမိုမြင့်မားကိုကင်းရွေ့လျား, ကိုကင်း CPP က, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့) ယခင်လေ့လာမှုများအတွက် LCR ကြွက်များပိုမိုဆင်တူအပြုအမူတွေနဲ့အတူကိုက်ညီသူတို့ကြွက်များထက် သာ. ကြီးမြတ်သောလူတန်းစား locomotor တုန့်ပြန်ပြသကြောင်းရှိရာရောမမြင့်မားရှောင်ရှားကြွက်လိုင်းများကနေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ ပိုပြီးကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲ , .
အဲဒီမှာဒီကွာဟမှုတွေနဲ့ကိုက်ညီကြောင်းအတိအကျမသိရသေး neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံပြုဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကြောင့်အများအပြားစမ်းသပ်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့အတိအကျ HCR / LCR စရိုက်လက္ခဏာတွေများအတွက်ထုတ်ဝေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပုံတူပွားခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကနဦးကင်းတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့2ကင်းဆေးများ (5 နှင့် 15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုဖြတ်ပြီးပြိုကျခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှစ်နာရီကျော်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဤသည်ယခင် HCR / LCR လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ 30 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းအောက်ပါ 10 မိနစ်အကဲဖြတ်ထက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒုတိယ, ကိုကင်း locomotor စမ်းသပ်အတူတူ locomotor လှုပ်ရှားမှုအခန်းကနဦး quinpirole sensitivity ကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဒီအတွေ့အကြုံကိုနောက်ဆက်တွဲကင်း locomotor စမ်းသပ်ခြင်းသည်ရှက်ကြောက်ခဲ့ကြပုံကိုရှင်းလင်းသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ conditional ရာအရပျ preference ကို (ဃကင်းထိုး vs ip) အကဲဖြတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများသိသိသာသာ sucrose Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ကြိုတင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအစားအစာလေ့ကျင့်ရေးအသုံးချဖို့အခြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုဒီအရေးပါသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်အကြောင်းအကြံပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးဆင်တူလေ့လာတွေ့ရှိ ။ အားလုံးအတွက်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကွဲပြားခြားနားမှုကိုတိုက်ရိုက် HCR / LCR စရိုက်လက္ခဏာတွေသုံးပြီးသူတို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်, D ကိုမှကနဦး sensitivity ကိုမြှင့်တင်ရန်2 DA အဲဒီ receptor ဆွတိုးလာ psychostimulant အသုံးပြုမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်တစ်ဦးအားနည်းချက်အချက်ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်: D အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု exploit2 ကြွက်တစ်ဦး outbred, မူးယစ်ဆေး-ရင်တော့မှားမယ်လူဦးရေအတွက် DA အဲဒီ receptor, စိတ်တွေ။ မျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ D ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်2 psychostimulants များ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှအားနည်းချက်သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်တချို့တစ်ဦးချင်းစီ rendering DA အဲဒီ receptor sensitivity ကို။ ဥပမာအားဖြင့်, မွေးမြူအခြေအနေများနှင့်လူမှုရေးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း D ကို၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပြသပြီ2 DA receptors ။ အထီးကျန်အိုးအိမ်လျော့နည်းသွား D နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်2 DA အဲဒီ receptor စကားရပ် အခြားသူများအဲဒီ receptor စကားရပ်မပြောင်းလဲမှုနှင့် D ကို၏အမူအကျင့် sensitivity ကိုမပြောင်းလဲမှုကိုသတင်းပို့ပေမယ့်2 DA receptors ။ လူမှုရေးအရသျောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, လူမှုရေးကြီးစိုး: D ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးလွှမ်းမိုးနိုင်သည်2 လွှမ်းမိုးတိရိစ္ဆာန်များ display ကို: D တိုးမြှင့်ဘယ်မှာ DA receptors2 DA အဲဒီ receptor စကားရပ်များနှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ် , ။ အစောပိုင်းဘဝလူမှုရေးနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများ D ကိုထိခိုက်ခဲ့ကြပေမည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များတစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ပေးထား, လူမှုရေးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း, ဖွယ်ရှိတစ်ဦးပံ့ပိုးအချက်မဟုတ်ကြ2 DA အဲဒီ receptor စိတ်တွေ, , , , , , , .
အကျဉ်းချုပ်တှငျကြှနျုပျတို့: D များ၏ locomotor သက်ရောက်မှုတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ကနဦး sensitivity ကိုနဲ့ကြွက်ကိုသရုပ်ပြ2 DA အဲဒီ receptor ဆွ, HD ကို2 ကြွက်, ld နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကင်း locomotor sensitivity ကို, ကိုကင်းဆုလာဘ်များနှင့်ကင်းဆည်းပူးနေပိုမို sensitivity ကိုအတူကိုက်ညီတဲ့2 : D အားဖြင့်ထုတ်လုပ် locomotor သက်ရောက်မှုမှအနိမ့်ကနဦး sensitivity ကိုရှိခြင်းကြွက်များ2 DA အဲဒီ receptor ဆွ။ ဒီအကြောင်း: D ပထမဦးဆုံးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကိုကိုကင်းရဲ့အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏ exacerbation ပေးထား, ကိုကင်းသုံးစွဲမှုပိုမိုမြင့်မားလွယ်ကူစွာထိခိုက်ကိုယ်စားပြုတစ်ဦး phenotype ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ: D ဟုတ်မဟုတ်ဖော်ထုတ်ရည်ရွယ်ပါလိမ့်မည်2 DA အဲဒီ receptor sensitivity ကိုအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုနှင့်ကိုကင်းမှီခို phenotypes ပိုမိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအဖြစ် mesocorticolimbic DA စနစ်၏ neurobiology အတွင်းဆက်စပ်ပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
တိရစ္ဆာန်များ၏တဦးတည်းဆောင်များတွင်အတွက် quinpirole-သွေးဆောင်ရွေ့လျား၏ဖြန့်ဝေ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုရမှတ်များ (က) ဖြန့်ဖြူး (ရောင်ခြည်လပ်ချိန် / နာရီ) ကိုတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုအတွင်း-session တစ်ခု quinpirole ထိုးတုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း။ ဒေတာပြွတ်အတွင်းအမှောင်မီးခိုးရောင်အလျားလိုက်လိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုထိုးမှာပျမ်းမျှရမှတ်ပုံဖော်။ (ခ) သုံး quinpirole ဆေးများကိုဖြတ်ပြီးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကွေး (AUC) ရမှတ်အောက်ရှိတွက်ချက်ဧရိယာ၏ဖြန့်ဖြူး။ မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဖြည့်ဒေတာအချက်နှင့်တွေက dotted line ကိုပျမ်းမျှရမှတ်ကိုယ်စားပြု (M = 15460) ။
ပုံ S1 ။
ပုံ S2 ။
LD2 နှင့် HD ကို2 အုပျစုဟာသူတို့ရဲ့: D အတွက်ကွဲပြားဘူး2 dopamine autoreceptor sensitivity ကို။ 0.1 များအတွက်တွက်ချက်ရမှတ်များ (က) ဖြန့်ဖြူး (% အခြေခံ) ကို ld အတွင်း / ကီလိုဂရမ် quinpirole MG2 နှင့် HD ကို2 အုပ်စုများ။ baseline လှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီ 0.1 ဖို့အခြိနျကာလအတွင်း session ကိုထိုးတုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက် / ကီလိုဂရမ် quinpirole အုပ်ချုပ်ရေး MG ဆား-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူကိုက်ညီ။ (ခ) အုပ်စုပျမ်းမျှ (± sem) သည် D ကိုများအတွက်2 autoreceptor sensitivity ကိုရမှတ်များသိသိသာသာမဟုတ်အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: RKB KEM ။ KEM: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: RKB ။ ဓါတ်ကူပစ္စည်း / ပစ္စည်းများ / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များလှူဒါန်းခဲ့: RKB KEM ။ RKB: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
1 ။ Wagner အက်ဖ်အေ, အန်တိုနီ JC (2002) မူးယစ်မှီခိုဖို့ပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေ; ဆေးခြောက်, ကိုကင်းနှင့်အရက်တို့အပေါ်မှာမှီခိုမှုအတွက်အန္တရာယ်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလ။ Neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology 26 ၏အမေရိကန်ကောလိပ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ဝေ: 479-488 ။ Doi: 10.1016 / s0893-133x (01) 00367-0
2 ။ Piazza PV မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်များစွာသည် Le Moal ML (1996) Pathophysiological အခြေခံ: စိတ်ဖိစီးမှု, glucocorticoids နှင့် dopaminergic အာရုံခံအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဝိသဗေဒ 36 ၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်: 359-378 ။ Doi: 10.1146 / annurev.pa.36.040196.002043
3 ။ Swanson LW (1982) ကို ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ကပ်လျက်ဒေသစီမံကိန်း: ကြွက်များတွင်ပေါင်းစပ်ချောင်း retrograde tracer နဲ့နဲ့ Immunofluorescence လေ့လာမှု။ ဦးနှောက်သုတေသနစာစောင် 9: 321-353 ။ Doi: 10.1016 / 0361-9230 (82) 90145-9
4 ။ Ritz MC, သိုးသငယ် RJ, Goldberg က SR, dopamine ပို့ဆောင်ရေးအပေါ် Kuhar MJ (1987) ကင်း receptors ကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ သိပ္ပံ 237: 1219-1223 ။ Doi: 10.1126 / science.2820058
5 ။ အန်ဒါဆင်သည် SM, dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြများတွင်ပီယပ် RC (2005) ကင်း-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ: အားဖြည့်ခြင်းနှင့် reinstatement များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Pharmacol Ther 106: 389-403 ။ Doi: 10.1016 / j.pharmthera.2004.12.004
6 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Baler R ကို, Telang က F (2009) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ Imaging ။ Neuropharmacology 56 ပျော့ပျောင်း 13-8 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2008.05.022
7 ။ Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ ။ ဦးနှောက် dopamine D1999 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်လူမှာ psychostimulants မှတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့် (အ 2) ဘီဘာအို။ Psychiatry 156 ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်: 1440-1443 ။
8 ။ ကာဣန SB, Negus အက်စ်အက်စ်, Mello NK, Patel က S နဲ့, Bristow L ကို, et al ။ D2002 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်နှင့်ဝတ္ထု D2 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူလေ့လာမှုများ: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ (2) အခန်းက္ပ။ neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံ 22 များအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်: 2977-2988 ။
9 ။ Thanos PK, Michaelides M က, Umegaki H ကို, Volkow ND (2008) D2R DNA ကိုလွှဲပြောင်းသည့်နျူကလိယ accumbens သို့ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates ။ synapses 62: 481-486 ။ Doi: 10.1002 / syn.20523
10 ။ ဘေလီတစ်ဦးက, Metaxas တစ်ဦးက, Yoo JH, McGee T က, မီးဖိုချောင်ငါ (2008) D2 အဲဒီ receptor ၏ Decrease binding ပေမယ် D2-နှိုးဆွပေး, G-ပရိုတိန်း activation အတွက်တိုး, နာတာရှည်မြင့်တက်ထိုး '' နဲ့ကုသကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက် dopamine Transporter binding နှင့်အမူအကျင့်ာင်း မူးရူး '' ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်း။ EUR J ကို neuroscience 28: 759-770 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2008.06369.x
11 ။ Briand LA က, Flagel SB, Seeman P ကို, ရော်ဘင်ဆင် TE (2008) ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး dopamine D2 အမြင့် receptors အတွက်မြဲတိုးထုတ်လုပ်သည်။ ဥရောပ neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology 18 ၏ဥရောပကောလိပ်များ၏ဂျာနယ်: 551-556 ။ Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2008.01.002
12 ။ Bachtell RK, Choi KH, Simmons DL, စွန်ငှက်အီး, Monteggia LM, et al ။ နျူကလိယအတွက် GluR2008 စကားရပ်၏ (1) အခန်းက္ပကိုကင်းထိခိုက်စေကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်အာရုံခံ accumbens ။ EUR J ကို neuroscience 27: 2229-2240 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2008.06199.x
13 ။ Collins က GT ကို, Truong yn, Levant B ကို, ချန် J ကို, ဝမ်က S, et al ။ ကြွက်များတွင်ကင်းမှ (2011) အပြုအမူာင်း: dopamine D3 အတွက်ယာယီကွဲပြားမှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားများနှင့် D2 အဲဒီ receptor sensitivity ကို။ Psychopharmacology 215: 609-620 ။ Doi: 10.1007 / s00213-010-2154-7
14 ။ နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ D2007 နှင့် D1 dopamine အဲဒီ receptor အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက် Edwards က S နဲ့, Whisler KN, Fuller, DC, Orsulak PJ, ကိုယ်ပိုင် DW (2) စွဲ-related ပွောငျးလဲ။ Neuropsychopharmacology 32: 354-366 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301062
15 ။ Ujike H ကို, Akiyama K ကို Otsuki S ကို (1990) D-2 သော်လည်းမ D-1 dopamine agonists စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူ subchronic ကုသမှုပြီးနောက်ကြွက်များတွင်တိုးပွားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန်။ Psychopharmacology (Berl) 102: 459-464 ။ Doi: 10.1007 / bf02247125
16 ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နျူကလိယ၏ Bachtell RK, Whisler K ကို Karanian: D, ကိုယ်ပိုင် DW (2005) အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်း-ဆည်းပူးနေနှင့်ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူတွေအပေါ် dopamine agonists နှင့်ရန်၏ shell ကိုအုပ်ချုပ်ရေး accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 183: 41-53 ။ Doi: 10.1007 / s00213-005-0133-1
17 ။ IV မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးရေရှည်ဆုတ်ခွာအောက်ပါကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူကိုရှာကွဖို့မက်လုံးပေးဖြန်ဖြေ de Vries တီဂျေ, Schoffelmeer AN, Binnekade R ကို, Vanderschuren LJ (1999) Dopaminergic ယန္တရားများ။ Psychopharmacology (Berl) 143: 254-260 ။ Doi: 10.1007 / s002130050944
18 ။ Dias က C, Lachize S က, Boilet V ကို, Huitelec အီး, Cador M (2004) locomotor ာင်းပေါ်နှင့်ကင်း-ရှာနှင့်အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement အပေါ် dopaminergic အေးဂျင့်များ၏ဆိုးကျိုးများ Differential ။ Psychopharmacology 175: 105-115 ။ Doi: 10.1007 / s00213-004-1839-1
19 ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူမှ relapse အတွက် Khroyan တီဗီ, Barrett-Larimore RL, Rowlett JK, Spealman RD (2000) Dopamine D1- နှင့် D2 တူသောအဲဒီ receptor ယန္တရားများ: ရွေးချယ်ရန်နှင့် agonists သက်ရောက်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther 294: 680-687 ။
20 ။ Schmidt က HD ကို D2006 ကဲ့သို့၏ပီယပ် RC (1) သမဝါယမလုပ်ငန်းများနှင့် D2 ကဲ့သို့ dopamine receptors နျူကလီးယပ်အတွက် shell ကိုကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement ဘို့လိုအပ်ပါသည် accumbens ။ neuroscience 142: 451-461 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2006.06.004
21 ။ D1996- နှင့် D1 ကဲ့သို့ dopamine အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ကိုယ်ပိုင် DW, Barnhart WJ, Lehman DA, Nestler EJ (2) အတိုက်အခံမော်ဂျူ။ သိပ္ပံ 271: 1586-1589 ။ Doi: 10.1126 / science.271.5255.1586
22 ။ နျူကလီးယပ်အတွက်အိုနေးလ်အီး, LeTendre ML, Bachtell RK (2012) Adenosine A2A receptors bi-directionally ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းပြောင်းလဲ accumbens ။ Neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology 37 ၏အမေရိကန်ကောလိပ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ဝေ: 1245-1256 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.312
23 ။ White က FJ, ဝမ် RY (1986) ကိုကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်နှစ်ဦးစလုံး D-1 နဲ့ D-2 dopamine receptors ၏တည်ရှိမှုအဘို့အ Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံ6များအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်: 274-280 ။
24 ။ 1988-OHDA pretreatment နေဖြင့်တားဆီး: ဟူ XT, နျူကလိယ၏ဝမ် RY (2) Disinhibition အဆိုပါ dopamine D141865 အဲဒီ receptor agonist Ly-6 နေဖြင့်အာရုံခံ accumbens ။ ဦးနှောက်သုတေသန 444: 389-393 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (88) 90953-5
25 ။ Eilam: D, Szechtman H ကို (1989) စက်ခေါင်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် D-2 agonist quinpirole ၏ Biphasic အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ 161 ၏ဥရောပဂျာနယ်: 151-157 ။ Doi: 10.1016 / 0014-2999 (89) 90837-6
26 ။ Piazza PV, Deminiere JM, Le Moal က M ရှိမုန် H ကို (1989) စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုမှတစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအချက်များ။ သိပ္ပံ 245: 1511-1513 ။ Doi: 10.1126 / science.2781295
27 ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက် Piazza PV, Deroche-ဂမုန်း V ကို, Rouge-ပိုတငျးက F, Le Moal က M (2000) ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းစွဲဖို့ predisposed တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-အားနည်းချက် phenotype ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ J ကို neuroscience 20: 4226-4232 ။
28 ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်း Gulley JM, ဟူးဗား BR, Larson GA, Zahniser ရော်ဘာ (2003) တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: အမူအကျင့်လက္ခဏာများ, ကိုကင်း pharmacokinetics နှင့်, dopamine Transporter ။ Neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology 28 ၏အမေရိကန်ကောလိပ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ဝေ: 2089-2101 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300279
29 ။ အနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောကိုကင်း locomotor-တုံ့ပြန်ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor ာင်းအတွက် Sabeti J ကို, Gerhardt GA, Zahniser ရော်ဘာ (2003) တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ရှင်းလင်းရေး၏ differential ကိုတားစီးနှင့်အတူဆက်စပ်နေကြသည်။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဆဲဟော်မုန်း 305 ၏ဂျာနယ်: 180-190 ။ Doi: 10.1124 / jpet.102.047258
30 ။ Allen က RM, Everett CV ကို, နယ်လ်ဆင်လေး, Gulley JM, Zahniser ရော်ဘာ (2007) အနိမျ့နှင့်မြင့်မားသော locomotor တုန့်ပြန်ကင်းမှအထီး Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်းသောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ 86: 37-44 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2006.12.005
31 ။ Mandt BH, Schenk S က, Zahniser ရော်ဘာ, Allen က RM (2008) တစ်ဦးချင်းအထီး Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်၎င်းတို့၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းရန်။ Psychopharmacology 201: 195-202 ။ Doi: 10.1007 / s00213-008-1265-x
32 ။ neuroleptics များအတွက်ပစ်မှတ်အဖြစ်ဝတ္ထု dopamine အဲဒီ receptor (D1990) ၏ Sokoloff P ကို, Giros B, Martres အမတ်, Bouthenet ML, Schwartz JC (3) မော်လီကျူးကိုယ်ပွားနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ သဘာဝတရား 347: 146-151 ။ Doi: 10.1038 / 347146a0
33 ။ Kostrzewa RM, Brus R ကို (1991) dopamine-agonist သွေးဆောင်ဟနေခြင်းအပြုအမူတစ်ခု D3 ကမကထပြုခဲ့အဖြစ်အပျက်လား? ဘဝကသိပ္ပံ 48: PL129 ။ Doi: 10.1016 / 0024-3205 (91) 90619-မီတာ
34 ။ Kurashima M က, Yamada K ကို Nagashima M က, Shirakawa K ကိုကြွက်အတွက် stereotypy နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် yawning အပေါ် putative dopamine D1995 အဲဒီ receptor agonists, 3-Oh-DPAT နှင့် quinpirole ၏ Furukawa T က (7) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ 52: 503-508 ။ Doi: 10.1016 / 0091-3057 (95) 00103-4
35 ။ psychostimulant စွဲဖို့တစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်မှ Deminiere JM, Piazza PV, Le Moal က M ရှိမုန် H ကို (1989) စမ်းသပ်ချဉ်းကပ်နည်း။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 13: 141-147 ။ Doi: 10.1016 / s0149-7634 (89) 80023-5
36 ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ချိတ်က MS, ဂျုံးစ် GH, Smith ကအေဒီ, Neill DB, တရားမျှတမှု JB Jr (1991) တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ 38: 467-470 ။ Doi: 10.1016 / 0091-3057 (91) 90308-ဏ
37 ။ ချိတ်က MS, Juncos JL, တရားမျှတမှု JB Jr က Meiergerd သည် SM, Povlock SL, et al ။ (1994) အသစ်အဆန်းမှတစ်ဦးချင်း locomotor တုံ့ပြန်မှု D1 နှင့် D2 receptors နှင့် mRNAs အတွက်ရွေးချယ်ပြောင်းလဲခန့်မှန်းထားပါတယ်။ neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံ 14 များအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်: 6144-6152 ။
38 ။ ချိတ်က MS, ဂျုံးစ် DN, Holtzman စင်ကာပူဒေါ်လာ, Juncos JL, Kalivas PW, et al ။ (1994) တစ်ဦးချင်းစိတ်ကြွဆေးအောက်ပါအပြုအမူအတွက်ကွဲပြားမှု, GBR-12909, ဒါမှမဟုတ် apomorphine သော်လည်းမ SKF-38393 သို့မဟုတ် quinpirole ။ Psychopharmacology 116: 217-225 ။ Doi: 10.1007 / bf02245065
39 ။ Flagel SB, ရော်ဘင်ဆင် TE, Clark က JJ, ကလင်တန်သည် SM, Watson ဟာ SJ, et al ။ (2010) အပြုအမူဆိုင်ရာ disinhibition နှင့်တုန့်ပြန်မှမျိုးဗီဇအားနည်းချက်တစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ဆုချ-related ဖို့တွေကို: စွဲဘို့ဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology 35 ၏အမေရိကန်ကောလိပ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ဝေ: 388-400 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.142
40 ။ Seeman P ကို, Weinshenker: D, et al Quirion R ကို, Srivastava LK, Bhardwaj SK ကို။ (2005) Dopamine supersensitivity စိတ္တဖို့အများကြီးလမ်းကြောင်းခဲ့ရသည်, D2High ပြည်နယ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 102: 3513-3518 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0409766102
41 ။ Marinelli M က, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအဖြူရောင် FJ (2000) Enhanced အားနည်းချက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏မြင့်မားသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ J ကို neuroscience 20: 8876-8885 ။
42 ။ Fattore L ကို, Piras, G, Corda MG, Giorgi အို (2009) ကရောမ high- နှင့်အနိမ့်ရှောင်ရှားကြွက်လိုင်းများဝယ်ယူ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, မျိုးသုဉ်းခြင်း, သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး reinstatement အတွက်ကွာခြား။ Neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology 34 ၏အမေရိကန်ကောလိပ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ဝေ: 1091-1101 ။ Doi: 10.1038 / npp.2008.43
43 ။ Giorgi အို Piras, G, Corda MG (2007) က psychogenetically ရွေးချယ်ထားသည့်ရောမ high- နှင့်အနိမ့်ရှောင်ရှားကြွက်လိုင်းများ: မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့တစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်လေ့လာဖို့စံပြ။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 31: 148-163 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2006.07.008
44 ။ et al Schramm-Sapyta NL, Cauley MC, Stangl DK, Glowacz S ကိုစတက်လွင်ပြင် Ka ။ ကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်ကိုကင်းစားသုံးမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခြားနားချက်များ (2011) အခန်းက္ပ။ Psychopharmacology 215: 493-504 ။ Doi: 10.1007 / s00213-011-2216-5
45 ။ D1995, 2-HT5A နှင့်ကြွက်များ၏ benzodiazepine receptors ၏စည်းနှောင်ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်အိမ်ယာအခြေအနေများနှင့်အီသနောစားသုံးမှု၏ Rilke အိုမေလတွင် T က, Oehler J ကို, Wolffgramm J ကို (1) သွဇာ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ 52: 23-28 ။ Doi: 10.1016 / 0091-3057 (95) 00093-c ကို
46 ။ လူမှုရေးအထီးကျန်နေဖြင့်သွေးဆောင်အသစ်အဆန်းမှ del Arco တစ်ဦးက, Zhu က S, Terasmaa တစ်ဦးက, မိုဟာမက် AH, Fuxe ငွေကျပ် (2004) Hyperactivity D2 အဲဒီ receptor function ကိုပြောင်းလဲမှုများဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့် striatum အတွက် binding မပေးပါ။ Psychopharmacology 171: 148-155 ။ Doi: 10.1007 / s00213-003-1578-8
47. Grant KA, Shively CA, Nader MA, Ehrenkaufer RL, Line SW ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူအကဲဖြတ် cynomolgus မျောက်များအတွက် striatal dopamine D1998 အဲဒီ receptor binding ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း (2) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Synapse 29: 80-83 ။ Doi: 10.1002 / (sici) 1098-2396 (199805) 29: 1 <80 :: အကူအညီ-syn7> 3.0.co; 2-7
48 ။ မော်ဂန်: D, Grant က ka, Gage, HD, Mach RH အ, Kaplan JR, et al ။ မျောက်တွေကို (2002) လူမှုကြီးစိုး: dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ နတ် neuroscience 5: 169-174 ။ Doi: 10.1038 / nn798
49 ။ နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါတစ် dopamine agonist ၏အကြိုးနှင့် locomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုမှ Papp က M, မပ်စ်ကတ် R ကို, Willner P ကို ​​(1993) Subsensitivity ။ Psychopharmacology 110: 152-158 ။ Doi: 10.1007 / bf02246965
50 ။ Papp က M, Klimek V ကို, Willner P ကို ​​(1994) imipramine အားဖြင့်နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် anhedonia နှင့်၎င်း၏မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်နှင့်ဆက်စပ် limbic forebrain အတွက် binding dopamine D2 အဲဒီ receptor အတွက်စင်ပြိုင်အပြောင်းအလဲများကို။ Psychopharmacology 115: 441-446 ။ Doi: 10.1007 / bf02245566
51 ။ Puglisi-Allegra S က, Kempf အီး, Schleef ကို C, Cabib S ကို (1991) ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများကွဲပြားခြားနားဦးနှောက် dopamine အဲဒီ receptor Subtype အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဘဝကသိပ္ပံ 48: 1263-1268 ။ Doi: 10.1016 / 0024-3205 (91) 90521-c ကို
52 ။ ဟင်နရီကို C, Guegant, G, Cador M က, Arnauld အီး, Arsaut J ကို, et al ။ (1995) ကြွက်များတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ာင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine receptors အတွက်ကြာရှည်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ ဦးနှောက်သုတေသန 685: 179-186 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (95) 00430-x
53 ။ Cabib S က, et al Giardino L ကို, Calza L ကို, Zanni M က, Mele-တစ်ဦး။ (1998) စိတ်ဖိစီးမှုဟာ mesoaccumbens နှင့် nigrostriatal စနစ်များအတွင်း dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအဓိကပြောင်းလဲမှုများကိုအားပေးအားမြှောက်။ neuroscience 84: 193-200 ။ Doi: 10.1016 / s0306-4522 (97) 00468-5
54 ။ Dziedzicka-Wasylewska M က, Willner P ကို, နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နာတာရှည်လက္ခဏာကုသမှုအောက်ပါ dopamine အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်ထဲမှာ Papp က M (1997) အပြောင်းအလဲများ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ 8: 607-618 ။ Doi: 10.1097 / 00008877-199711000-00017
55 ။ Carr က KD ကင်မ် GY, Cabeza က de Vaca S ကို (2001) တိုက်ရိုက် dopamine အဲဒီ receptor agonists ကြွက်များတွင်နာတာရှည်အစားအသောက်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းနှင့် locomotor-ကိုသက်ဝင်ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology 154: 420-428 ။ Doi: 10.1007 / s002130000674